အာဆီယံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆို - Xinhua News Agency
၅၄ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး(AMM) ကို ဩဂုတ် ၂ ရက်က အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘန်ဒါဆာရီဘီဂါဝန် ၊ ဩဂုတ် ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို အားလုံးရရှိစေရေး နှင့် လက်လှမ်းမီစေရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သွားကြရန် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက ဩဂုတ် ၂ ရက်တွင် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။၅၄ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးမှ ပူးတွဲထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက ဒေသတွင်း ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ဖြန့်ချိရေးကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။
“ အာဆီယံရဲ့ မိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူ ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမှု ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၊ ထုတ်လုပ်မှု နဲ့ ဖြန့်ချိမှု တို့ကို အတွေ့အကြုံဖလှယ်ခြင်း နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို တိုးမြှင့်သွားဖို့ ၊ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက် သာတူညီမျှရရှိအောင် စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ ၊ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေကို အားလုံးရရှိစေရေး နဲ့ လက်လှမ်းမီစေရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ဖို့ ၊ ဒါ့အပြင် အနာဂတ်မှာ ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ အခြားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်”
ထို့ပြင် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက လူသားများ အသက်စတေးခဲ့ရခြင်း နှင့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရခြင်းများနှင့်အတူ COVID-19 ကပ်ရောဂါရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရှေ့ဆက်ကြုံတွေ့ရမည့် လူမှု-စီးပွားသက်ရောက်မှုများအပေါ် ၎င်းတို့အနေဖြင့် နက်ရှိုင်းစွာစိုးရိမ်ပူပန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ COVID-19 ကပ်ရောဂါမှ အာဆီယံဟာ ပိုမို ပြန်လည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာစေရေးနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိစေရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့မဟာဗျူတစ်ခုနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမယ့် အာဆီယံဘက်စုံပြန်လည်နလံထူရေးမူဘောင် နဲ့ သူရဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံချက်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ် ” ဟု ပူးတွဲကြေညာချက်က ဆိုသည်။
“ COVID-19 ရောဂါတုံ့ပြန်ရေး အာဆီယံရံပုံငွေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀.၈ သန်း ထည့်ဝင် ကြဖို့ အခုကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ အာဆီယံပြင်ပမိတ်ဖက်တွေနဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်” ဟု အာဆီယံနိုင်ငံခြာရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အာဆီယံဒေသတွင် မိမိကိုယ်ကို-အားပြုမှီခိုခြင်း နှင့် ကာကွယ်ဆေးလုံခြုံမှုသိရှိနားလည်ခြင်း အတွက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက အာဆီယံကာကွယ်ဆေးလုံခြုံရေး နှင့် မိမိကိုယ်ကို-အားပြုမှီခိုရေး ၂၀၂၁-၂၀၂၅ (ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance 2021-2025) လုပ်ငန်းစီမံချက် နှင့် ဒေသဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကို ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဆက်လက်တွန်းအားပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၅၄ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကို ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် တနင်္လာနေ့က လက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အာဆီယံအချိန်ဇယားအစီအစဉ်အရ ၂၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်စီအစည်းအဝေး ၊ ၂၂ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ+၃ ( တရုတ်၊ဂျပန် နှင့်တောင်ကိုရီးယား) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ၊ ၁၁ ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများထိပ်သီးအစည်းအဝေး နှင့် ၂၈ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံဒေသတွင်းဖိုရမ်တို့ကို ဘရူနိုင်းနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် ဩဂုတ် ၂ ရက် မှ ၈ ရက်အထိ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် လက်ခံ ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BANDAR SERI BEGAWAN, Aug.4(Xinhua) — ASEAN foreign ministers on Wednesday called for making COVID-19 vaccines available and affordable to all as global public goods.
According toajoint communique released by the 54th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, ASEAN foreign ministers noted the need to enhance vaccine production and distribution in the region.
“We called for enhanced collaboration and sharing of experience with ASEAN’s partners in research, development, production, and distribution of vaccines, providing equitable access to medicines for COVID-19, making COVID-19 vaccines available and affordable to all as global public goods, as well as preparing for other future public health emergencies.”
“We welcomed the progress made in implementing the ASEAN Comprehensive Recovery Framework and its Implementation Plan, which serves asaconsolidated strategy for ASEAN to emerge more resilient and stronger from the COVID-19 pandemic,” the joint communique said.
“We welcomed the continued contributions from ASEAN Member States and external partners to the COVID-19 ASEAN Response Fund which now has pledged contributions amounting to 20.8 million U.S. dollars,” ASEAN foreign ministers added.
To realize vaccine security and self-reliance in ASEAN, the foreign ministers said that they looked forward to the implementation of the Regional Strategic and Action Plan on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance 2021-2025.The 54th ASEAN Ministerial Meeting was held here in Brunei via videoconference on Monday.
According to the ASEAN schedule, the 29th ASEAN Coordinating Council Meeting, 22nd ASEAN Plus Three (China, Japan and South Korea) Foreign Ministers’ Meeting, 11th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting, and 28th ASEAN Regional Forum will also be held here in Brunei via videoconference from Monday to Saturday.
Photo- The 54th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) is held on Aug. 2, 2021 via videoconference. (Photo courtesy of joint communique of the 54th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting)